Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Xenoglossy sy Phobia Reincarnation of Sharada | Uttara Huddar: Ny toetran'ny fiainana taloha izay voatahiry ao anaty fanahy - fikarohana Reincarnation
Ahoana no nahatonga izany? Fampisehoana fohy ny fiainan'ny olona taloha
Mpikaroka: Satwant Pasricha, PhD & Ny hafa, Fikarohana nofintinin'i Ian Stevenson, MD
From: Unlearned Language, New Studies in Xenoglossy, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Tena mahavariana tokoa ity tranga ity mikasika an'i Uttara Huddar, tahaka ny endriky ny fiainana taloha, ny anarany Sharada dia haka an-keriny ny vatan'i Uttara ary hijanona mandritra ny fe-potoana maromaro. Ao amin'ny ankamaroan'ny tranga vao teraka dia ny olona amin'izao fotoana izao no mijery ny fahatsiarovana efa lasa lavitra ho fahatsiarovana lavitra ary mitazona ny fanaraha-maso ny fahatsiarovan-tena.
Mifanohitra amin'izany, amin'ity tranga ity, Sharada, ny fiainan'ny olona taloha, dia nandray tanteraka ny fahatsiarovan'ny vatan'i Uttara ho toy ny tsy nahatsiarovan'i Uttara ny zava-nitranga fony i Sharada niseho. Ny fisehoan'i Sharada dia niseho nandritra ny fe-potoana sivy taona farafahakeliny.
Amin'izany, ny Sharada | Ny raharaha Huddar dia maneho ny fananana mahaliana ny fanahy, izay ny hoe Ny fanahy dia mitazona ny fiainan'ny olona ao anatin'izany. Ity no resahina ao amin'ny fizarana mitondra ny lohateny Soul Evolution.
Mampiseho izany koa ity tranga ity Mety hiova ny firaisam-pirenena sy ny firaisana ara-nofo manomboka amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa. Ny endrika mampientanentana dia ny fanehoana ny toetra taloha teo amin'ny fiainana, Sharada, dia naneho hevi-diso sy tsy firaharahiana ho an'ny vondrona foko izay anisan'ny toetra maha-olona, ​​Uttara. Izany dia mampiseho fa tsy misy dikany ny fametrahana ny maha-izy azy ny tena maha-izy azy amin'ny fifamatoram-pirenena na foko, satria afaka miova avy amin'ny fampodiana ho an'ny hafa izany.
History of Bengal mifandraika amin'i India
Nipetraka i Uttara sy ny fianakaviany Nagpur, tanànan'ny 1 tapitrisa, any avaratr'i Inde afovoany. Ao amin'ny sarintany omena etsy ambony, hita eo akaikin'ny afovoan'i India i Nagpur. Nilaza i Sharada fa niaina izy Bengal, izay mihoatra ny 1200 kilometatra na 750 kilaometatra avy ao Nagpur. Ao amin'ny sarintany nomena ny marina, i Bengal dia ho hita eo amin'ny faritra asongadina amin'ny mavo ary any amin'ny faritra misy an'i Bangladesh amin'izao fotoana izao.
Ny tantaran'ity faritra ity amin'izao fotoana izao dia sarotra. Bengal dia faritra iray eo anelanelan'i India sy Myanmar, izay nantsoina taloha hoe Birma. Tao amin'ny 1947, rehefa nahazo fahaleovan-tena i India, dia nizara ho firenena roa i Bengal tamin'ny andalana ara-pivavahana. Ny tapany andrefana dia lasa ampahany amin'i India, izay nantsoina hoe Bengale Andrefana. Kolkata, fantatra taloha tany Calcutta, no tanàna fototra ao Benghazi Andrefana. Ny faritra atsinanan'i Bengal no lasa firenena Bangladesh. Mbola mifampizara ny fiteny Bengali mahazatra hatrany ny West Bengal sy Bangladesh.
Ao India, fiteny maro samihafa no resahina. Ny fiteny lehibe indianina dia Hindi, Bengali ary Marathi. Na ireo fiteny telo aza dia avy amin'ny fiteny fototra tranainy fahiny, amin'izao vanimpotoana ankehitriny izao, dia samy hafa amin'ny fiteny Espaniôla sy Italiana izy ireo. Ireo Bengaly miteny dia tsy mahafantatra Hindi na Marathi, ary tsy mahay teny Bengali na Hindi.
Xenoglossy amin'ny raharaha any am-parany ao Sharada | Uttara Huddar
Uttara, ny toetrany amin'izao fotoana izao, dia afaka miteny afa-tsy ny Marathi, ny fitenin'ny ray aman-dreniny, raha toa kosa i Sharada, ny toetrany taloha, dia tsy afaka niteny afa-tsy Bengali, fiteny izay tsy azon'i Uttara sy ny fianakaviany. Noho izany, ity tranga ity dia maneho tranga tena miavaka amin'ny xenoglossy.
Xenoglossy dia ny fahaizana miteny amin'ny fiteny tsy mahazatra ny fiteny amin'ny fomba mahazatra. Tsy nianatra ny fiteny Bengali mihitsy i Sharada, ary tsy azony tsara izany tamin'ny toe-piainany mahazatra. Ary rehefa nalain'i Sharada ny vatan'i Uttara dia azony atao tsara ny miteny Bengali.
Ankoatra izany, nanome ny anaran'ny fianakaviany tany Bengal ho an'ny naman'ny Fikambanana i Sharada, izay voamarina tamin'ny alalan'ny rakitsoratra tetaky ny Bengali. Uttara, ny toetrany amin'izao fotoana izao, dia tsy nahalala an'ireny olona ao amin'ny fianakaviany ireny hatramin'ny nahatongavan'izany.
Ny mahagaga indrindra dia ny hoe Sharada, ny toetrany taloha, dia tsy nahalala fa maty izy. Raha ny tokony ho izy, dia nihevitra izy fa mbola velona izy, nentina tamin'ny fotoana nanomboka tamin'ny taonjato fahasivy ka hatramin'ny ankehitriny. Sharada dia nanambara fa nogadraina tamin'ny tongony havanana izy tamin'ny alalan'ny cobra, izay no zava-niseho farany nofaritany nandritra ny androm-piainany, saingy toa tsy takatr'izy ireo hoe maty izy noho ny nanaikitra ny bibilava.
Tsy takatr'i Sharada ny fisehon'ireo maoderina, toy ny fitaovana keky, ny mpaka sary ary ny fiara mpitondra fiara, izay tokony ho tsapany fa niseho tamin'ny vanim-potoana hafa izy. Na izany aza, nitazona an'i Sharada fa mbola velona izy sy ny fianakaviany Bengali ary mbola tsara.
Uttara Huddar sy ny fianakaviany
Andeha hojerentsika ireo olona ao amin'ity tantara mahaliana ity. Uttara, resaka momba ny raharaha, dia ny zanakavavin'i GM sy i Manoram Huddar. Araka ny voalaza dia niaina tao Nagpur, tanàna misy mponina iray tapitrisa, izay ahitana ny teny main ny Hindi sy Marathi, na dia miaina any amin'ny faritra aza ny 10,000 Bengalis. Ny fianakavian'i GM Huddar dia nipetraka tany amin'ny faritra Nagpur nandritra ny taranaka maro.
GM Huddar dia niady tamin'ny fahaleovan-tena Indiana ary nahazo mari-pahaizana tao amin'ny Oniversiten'i Nagpur, taty aoriana dia nanjary tompon'ny tany sy mpamboly. Niteny Marathi i Mr. Huddar. Tsy nahalala Bengali izy. Manorama, vadiny, dia niteny Marathi sy Hindi, saingy tsy niteny Bengali izy. Tsy tonga tany Bengal ny fianakaviany ary tsy nanana mpiray monina Bengali izy ireo. Ny fianakaviana Huddar dia nivavaka tamin'ny andriamanitra Hindoa Ganesh, ny miaraka amin'ny lohan'ny elefanta, izay aseho amin'ny ankavanana.
Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara amin'ny trangan'aretina ao amin'ny vatana
Rehefa bevohoka tamin'i Uttara i Manorama, dia matetika izy no nanonofy fa ny cobra dia tokony hanaikitra mafy ny tongony ankavanana. Nalain'i Manorama ny bibilava ary nifoha avy eo. Toy ny hoe niaina ny endrik'i Sharada, ny fiainan'i Uttara taloha, i Manorama, tamin'ity nofy ity. Sharada, toa, dia niezaka ny nifandray tamin'ny renin'i Manorama, renin'i Uttara, fa ho teraka i Sharada.
Izany dia mampahatsiahy ny nofy ao amin'ny Hanan Monsour | Suzanne Ghanem raharaha momba ny harerahana, izay notadiavin'i Ian Stevenson, MD. Amin'io tranga io dia niteny tamin'i Ian Stevenson ny renin'i Suzanne Ghanem mikasika ny nofinofiny izay efa nitranga talohan'ny nahaterahan'i Suzanne. Tao anatin'ilay nofy dia hitan'i Ramose Ghanem fa hanan-janaka vavy izy. Avy eo izy dia nahita vehivavy iray izay efa tokony ho efapolo taona, izay nahatsikaritra azy taty aoriana toa an'i Suzanne. Ity ramatoa tao amin'ny nofy ity dia nilaza hoe: "Hanatona anao aho." Raha lazaina amin'ny teny hafa, toa niseho tao amin'ny nofy i Suzanne, tahaka ny nisehoan'i Sharada tamin'ny tenany ho any amin'ny reniny ho avy, raha toa kosa ilay nofinofy miaraka amin'ny cobra mangidy azy tongotra havanana.
Ian Stevenson, raha ny marina, dia nantsoina ireo nofinofy izay toa maneho ny fanahy ny fampodiana ho an'ny havan-trano amin'ny hoavy ho toy ny "fanambarana nofinofy" ny fanahy iray. Nolazaina i Stevenson tamin'ny fanambarana ny nofinofin'ny havana amin'ny tranga tany amin'ny tany maro.
The Monsour | Ghanem Ny zava-dehibe amin'ny zava-misy, amin'ny lafiny iray, dia zava-dehibe koa amin'ny fampisehoana izany Ny endriky ny tarehy dia afaka mitoetra ho mitovy manomboka amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa.
Fandinihana ny fiainana taloha tao amin'ny Phobia, ary koa tamin'ny Dream sy ny literatiora
Uttara dia teraka tamin'ny mars 14, 1941. Nanan-jaza nandritra ny fahazazany i Uttara, na dia nanana bibilava misy bibilava aza izy. Nihanatanjaka nanomboka tamin'ny enina ka hatramin'ny valo ny tahan-drivotra, araka izay tsapan'ny rainy.
Ireo Phobias mifandraika amin'ny trauma niainana taloha dia voamarina amin'ny tranga vao teraka. Ohatra, ao amin'ny Rashid Khaddege | Raharaha Daniel Jurdi, I Daniel dia nanana karazana fiara mifindrafindra haingana. Nandritra ny androm-piainany taloha toa an'i Rashid dia maty izy raha nisy fiaramanidina haingana niova fo izy. Ny Khaddege | Ny raharaha Jurdi dia tranga iray vaovao momba ny fanambadiana indray ao amin'ny vatana izay mampiseho izany Ny endriky ny tarehy dia mety mitovitovy amin'ny fiainana iray manontolo.
Nanana nofinofy i Uttara hatramin 'ny faha-8 taonany, izay nahitany ny vadiny tonga teo am-pitaingo azy. Rehefa tonga izy, dia nikarakara azy tsara. Ireo nofinofintsika, ho hitantsika, hisaintsaina ny androm-piainan'ny fiainana taloha, Sharada.
Fony mbola zaza i Uttara dia liana manokana tany Bengal sy Bengalis, ary dia namaky ny fandikana ny literatiora Bengali izy. Izany tombotsoa izany dia toa mifandraika amin'ny fiainany taloha tahaka an'i Sharada, izay nonina tany Bengal. Mariho fa novakin'i Uttara ny fandikan-teny Marathi amin'ny literatiora Bengali; Tsy nianatra ny fiteny Bengali izy.
Uttara, fony mbola tanora, dia nandeha tany amin'ny Oniversiten'i Nagpur izay nahazoany mari-pahaizana maîtrise tamin'ny teny anglisy ary tompon'ny Fitondram-panjakana. Izy dia nokaramaina ho mpampianatra amin'ny fotoana lavitr'ezaka ao amin'ny Departemantam-panjakana misahana ny serasera ao amin'ny Oniversiten'i Nagpur. Ny fanabeazana sy ny tantaram-piainany dia maneho fa i Uttara dia vehivavy manan-tsaina sy fotsy.
Sharada, toetran'ny fiainam-pahaterahana taloha, mitranga
Tao amin'ny 1973, fony 32 taona i Uttara, dia nigadra tao amin'ny hopitaly iray ao Nagpur izy noho ny asmaty sy ny olana momba ny gynecologie. Izy dia teo ambany fiahian'ny Dr. JR Joshi, izay Bengali. Tao amin'ny hopitaly dia nisy yogi tonga nanome lahateny sy fampianarana momba ny fisaintsainana. Nanomboka nizara fisaintsainana tany amin'ny hopitaly i Uttara.
Ny fihetsik'i Uttara dia nanomboka niova ary nanomboka niteny fiteny hafa izy, izay tapa-kevitra ny ho Bengali. Nanomboka nanao akanjo maromaro ihany koa izy, nanao sarety sariana tamin'ny fomba Bengali, nametraka ampahany tamin'ny sari teo ambonin'ny lohany, namorona sarona iray. Ny vehivavy Maratha, toa an'i Uttara, dia tsy nitafy saris tamin'io fomba io. Niala tao amin'ny hopitaly i Uttara, nilaza fa "te-handeha ho any amin'ny toerana iray niheverany azy izy." (1)
Very hevitra tanteraka ny ray aman-dreniny tamin'ity fiverenan'ny hetsika ity, satria tsy nisy fifandraisana tamin'ny Bengal. Gaga izy ireo tamin'ny fomba fitenin'ny zanakavavy tampoka ny Bengali tampoka, fiteny izay tsy azon'izy ireo, na koa taloha. Ankoatra izany, raha miteny fotsiny Bengali ny zanany vavy dia tsy afaka ny hifampiresaka aminy.
Sharada dia mamaritra fiainana taloha tany Bengal Andrefana
Tamin'ny alalan'ireo mpandika-teny Bengali, Uttara dia nanome antsipiriany momba ny zavatra niseho taloha ela be. Nilaza izy fa Sharada no anarany, fa tsy Uttara. Nolazainy fa ny anaran-drainy dia Brajnath Chattopadhay ary izy dia pretra tao amin'ny Tempolin'i Kankalini akaikin'ny Bardhaman, izay antsoina koa hoe Burdwan, any Bengal Andrefana. Ny fisian'ity tempoly madinika ity dia nohamarinina tatỳ aoriana.
Nilaza i Sharada fa Renukha Devi ny anaran-dreniny. Nilaza izy fa maty ny reniny fony izy 2 taona. Nanambady vehivavy iray nantsoina hoe Anandamoyi ny rainy. Nilaza i Sharada fa nanangana an'i Sharada ny nenitoan'ny reniny iray antsoina hoe Jagadhatri Mukhopadhaya, izay nipetraka tao Saptagram, taorian'ny nahafatesan'ny reniny. Noho izany, nandany ny ankamaroan'ny fahazazany tao amin'ny Saptagram i Sharada, amin'izao fotoana izao any Benghazi Andrefana.
Nilaza i Sharada fa fony izy fito taona, dia nivady tamin'ny fanambadiana iray natao tamin'i Vishwanath Mukhopadhaya, izay dokotera Ayurveda tao an-tanànan'i Shivapur. Ny vadiny dia nifindra monina avy any ambanivohitra mba hijery ny marary. Taorian'izay, raha nanontany an'i Sharada indray ny anaran'ny vadiny amin'ny anaran'ny lehilahy Bengali dia nanontany an'i Sharada indray ny fihetsiky ny lehilahy Bengali, tsy nanoratra ny anaran'ny vadiny izy, fa nanoratra izany tany Bengali. Azon'i Sharada afaka nanoratra, na niteny, tamin'ny Bengali, raha tsy vitan'i Uttara izany.
Ny mahaliana, raha niseho voalohany tao amin'ny hopitaly i Sharada raha mbola teo ambany fiahian'i Dr. Joshi i Uttara, dia nanapa-kevitra ho vady i Sharada, izay nahatonga an'i Dr. Joshi tsy nahazo aina. Toa nahaliana azy izy. Raha nahita ny Dr. Joshi nisakafo tamin'ny vehivavy mpiasa tao amin'ny hopitaly i Uttara, dia nivadika ho Sharada izy ary nanindrona ny Dr. Joshi tamin'ny fialonana.
Satria dokotera Bengali i Dr. Joshi, tahaka ny vadin'i Sharada, dia nanontany tena i Ian Stevenson raha nanohana an'i Sharada i Joshi. Amin'ny lafiny iray, nilaza i Sharada fa vadiny i Dr. Joshi. Azo heverina fa i Dr. Joshi no vadin'i Sharada, Vishwanath Mukhopadhaya, teo aloha. Io fitsapana io, indrisy, tsy azo valiana na omena tsiny.
Nilaza i Sharada fa nanan-jaza roa izy ary mbola bevohoka indray fanintelony. Raha bevohoka dimy volana izy, dia nandeha tamin'ny sari-tanan'i Shivapur, izay nonenany sy ny vadiny, tany Saptagram mba hitsidika ny nenitoan'ny reniny izay nanangana azy. Nandao diamondra ny peratra amin'ny orona sy ny 125 rupees tao an-trano, noho ny tahotra fa mety hangalatra ireo sarobidy ireo ny jiolahy eny an-dalana.
Latsaky ny roa volana taorian'ny nahatongavany tao amin'ny Saptagram, nilaza i Sharada fa manangona voninkazo ao an-jaridaina izy rehefa misy bibilava mamitsaka azy amin'ny tendrony ankavanana. Ity no hetsika farany nofaritana tamin'i Sharada nandritra ny androm-piainany.
Mpikaroka marobe no manadihady ny raharaha zaridaina Xenoglossy avy amin'i Uttara Huddar
Amin'ity fotoana ity, te-hizara ity Sharada ity aho Nodinihan'ireo manam-pahaizana maromaro nandritra ny taona maro ny raharaha momba ny harerena Uttara Huddar. Nisy tantara an-gazety momba ity raharaha ity nivoaka tao amin'ny 1975, izay nisarika ny sain'ny Ian Stevenson, MD, izay niara-niasa tamin'ireo profesora tany India.
Ohatra, i Profesora P. Pal, mpanadihady ao amin'ny Rexarnation sy teratany any Bengal, ary koa Dr. RK Sinha, izay teratany any Bengal, dia nirotsaka be. Dr. SK Das, profesora Bengali, dia nanamarina fa tena miteny Bengali tokoa i Sharada. Natao sy nianatra ny horonan-tsarin'i Sharada. Ian Stevenson dia niara-niasa tamin'ireo mpikaroka samihafa ireo ary nanambatra ny valiny tao amin'ny bokiny, Unlearned Language.
Fanamarinana ny fanambarana nataon'i Sharada, ny toetran'ny fiainana taloha
Tamin'ny volana 1975, Dr. Sinha, iray amin'ireo mpikaroka nandray anjara tamin'ilay tranga, dia nitsidika an'i Saptaram any West Bengal ary nanontany momba ny fianakaviana nofaritan'i Sharada. Taorian'ny ezaka be dia nahita an'i Satinath Chattopadhaya, izay namorona tetiarana razambe izay niverina tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Misy ohatra tsara tarehy sy tena marevaka momba ny firaketana an-tsoratra ara-tsiansa na ny fianakaviana iray eto ambany.
Brajnath Chattopadhaya, ilay anarana hoe Sharada dia nilaza fa anarana ny rainy, niseho tao amin'ny tetiarana.
Dr. Sinha dia nitondra ny tetiarana niverina tany Nagpur ary nanontany an'i Sharada mba hilaza ny havany. Sharada dia nanao ireto mari-pamantarana manaraka ireto:
Reniko: Renukha Devi
Rahalahy-Kailasnath, Srianth ary Satinath
Dadatoa Devdas, nanitsy an'i Devanth
Niorina tamin'ny fahaiza-manaon'i Sharada ny nametraka anarana marina ireo havany ireo, araka ny nambaran'ny tetiarana, dia resy lahatra i Ian Stevenson fa i Sharada dia nanondro ny fianakavian'i Chattopadhaya tamin'ny fiainany taloha. Raha marina izany, dia voamarina tsara ny fahatsiarovany na ny fanambarany. Indrisy fa ny anarana ho an'ny vadiny sy ny rafozan-janany dia tsy azo valiana avy amin'ny tetiarana, satria izy ireo dia tao anatin'ny hazo samihafa.
Na izany aza, nilaza i Sharada fa moanina iray naka ny iray amin'ireo mpianakavin'ny lehilahy hanombohana ny baikon'ny Nath. Nilaza izy fa ny tanàna taty aoriana dia nantsoina hoe fianakaviana Nath ny fianakaviana ary ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana dia naka ny "nath" ho tovana. Ny tetiarana dia nanamafy fa ny nath dia miseho ho tovana ho an'ny mpianakavy lahy rehetra mandraka androany. Ary indray, ny fanambaran'i Sharada dia nohamarinina tamim-pahamarinana.
Ian Stevenson dia nanipika fa tsy azo inoana fa ny fianakaviana Huddar dia afaka namaky ny tetiarana mialoha ny fanadihadiana, araka ny nosoratana tamin'ny teny Bengali, izay tsy azon'ireo Huddars.
Xenoglossy: Ny fiteny Bengali ao Sharada
Na dia eo aza ny tranga xenoglossy, dia mety voafetra ny voambolana, afaka miteny Bengaly betsaka i Sharada. Hoy ny Profesora Pal: "Niresaka tamin'i Sharada nandritra ny adiny folo aho. Tsy nisy nanjo anay mihitsy ny nahatakatra ny teny iray nolazain'ny iray hafa. Niresaka tamin'ny fitsaboana ara-dalàna izahay. "(2)
Nanamarika ihany koa ny profesora Pal, "Nandritra ny fotoana rehetra dia niresaka tsara tamin'ny fiteny Bengali izy, toy ny zazavavy virjina mahazatra ary tsy nahatsikaritra ny fahasamihafana amin'ny vehivavy Bengali aho." (3)
Dr. Roy dia nanao sonia taratasy iray an'i Sharada ary niteny nandritra ny adiny roa izy tamin'ny fiteny Bengali. Tsotra ny valinteniny ary nasehony ny baiko feno ny fiteny Bengali.
Araka izany, i Sharada dia naneho ny zavatra antsoin'i Ian Stevenson amin'ny xenoglossy, izay tsy afaka miteny afa-tsy fiteny izay tsy nianatra, fa kosa ny lohahevitra dia afaka mamaly ireo fanontaniana amin'ity fiteny ity amin'ny fomba interactif. Afaka mamaky sy manoratra Bengali koa i Sharada. Mifanohitra amin'izany kosa, araka ny nomarihina, Uttara dia tsy nahatakatra ny Bengali mihitsy.
Ny fiainan'i Pastora Sharada dia fahalalana momba ny jeografika sy ny toerana bengali
Ankoatra ny fahafahana mahazo, miteny sy manoratra Bengali, dia nampiseho fahalalana goavana momba ny jeografika sy toerana bengali Bengali, eny fa na dia lavitra sy toerana tsy fantatra aza.
Tsarovy fa nilaza i Sharada fa mpisorona ny mompera tao amin'ny Tempolin'i Kankalini ao Kanchanagar ary kilaometatra enina avy ao Burdwan, tanàna iray antsoina ankehitriny Bardhaman, any Bengal Andrefana. Ny fisiana sy ny toeran'ity tempoly ity dia voamarina, izay tena mahatalanjona satria ny tempoly dia tsy fanta-daza. Raha ny marina, ny tanànan'i Kanchanagar dia efa rava, angamba aorian'ny valanaretina, ary efa nihoatra ny ala noho ny taona 50.
Raha ohatra iray hafa, raha nampiseho an'i Sharada sary iray an'ny Tempolin'i Benganiana Hanserhwar ao Bamberia i Sharada, dia namaritra azy avy hatrany ny anarana Sharare. Rehefa nanontaniana hoe firy ny tilikambo maro tao amin'ny tempoly, nanambara i Sharada fa misy tilikambo 13, na dia misy ampahany amin'ny tempoly aza ny sary, ary mampiseho tilikambo fito ihany.
Fantany izany Kali Ny andriamanibavin'ny tempoly dia ny sampy Kali dia nanana sandriny efatra, fa ny hazo sampy dia natao tamin'ny hazo nopetahana manga ary ny Rajah avy amin'i Banberia dia nitondra ny sampy tao Benares. Tena marina ireo fanambarana ireo.
Sharada dia nanoritsoritra mazava tsara ihany koa ny momba ny jeôgrafia nifanena ary nandeha an-dalana tamin'ny sambo avy any Shivapur ho Shikarpur. Nofaritany ihany koa ny antsipiriany ara-jeografika nifanena tamin'ny dia avy tany Calcutta ho an'i Shivapur.
Tsy fantatry ny fianakavian'i Uttara sy ny fianakavian'i Huddar ny Tempolin'i Kankalini na Hanserhwar, na ny tsipiriany ara-jeografika momba ny dia any Bengal. Ankoatra izany, tsy fantatra ny fampahalalam-baovao ary tsy nahitana fitomboana tao amin'ny literatiora Bengali izay novakian'i Uttara tamin'ny fahatanorany.
Ny fiainan'i Pastora Sharada dia ny fahalalan'ny Bengali
Sharada dia nanana fahalalana mahatalanjona momba ny sakafo ara-tsakafo ao Bengal, izay tiany kokoa noho ny sakafo an'i Nagpur, India. Na dia tsy nankafy zava-mahadomelina aza i Uttara, i Lovada dia tia bandy Bengali. Rehefa nanontaniana izay tena tiany izy dia nilaza sitabhog, izay natao tany Burdwan, Bengal. Azony fantarina izy sitabhog rehefa nentina tany aminy izy. Ankoatra izany, Sharada dia afaka nanavaka ireo zava-pisotro misy alikaola avy any Bengal tamin'ny fanesorana natao tao Nagpur.
Rehefa nifady hanina i Sharada dia nangataka rano voanio. Manana rano ny voaniho ao Bengal, fa ny voaniho ao amin'ny faritra izay niainan'ny Uddars dia tsy manao izany.
Sharada dia nisafidy hanina vary ary napetraka ny yogourt tao amin'ny vary, izay fomban'ny Bengali. Mifanohitra amin'izany kosa, Sharada sy ny fianakaviany dia manolotra mofo avy amin'ny varimbazaha, izay matetika nohanin'ny Marathi. Sharada dia nitatitra tamin'ireo mpikaroka ho lisitra lavalava momba ny sakafo izay nohanina tany Bengal.
Ny tsy firaharahiana teknolojia an'i Sharada
Tsy takatr'i Sharada ny fiaran-dalamby, fiara, herinaratra, jiro elektrika, mpankafy elektrika na telefaona. Ian Stevenson dia nanoratra fa ny tavoahangy verindroa dia nanafintohina azy. Tamin'ny Benghazi tamin'ny taon-jato faha-19 dia notehirizina tao anaty tany na sambo metaly ny sakafo sy ny rano. Raha nanontaniana izy raha te hividy sakafo Bengalis izy dia hoy izy hoe, "Ahoana no ahafahako mahandro? Tsy misy kitay na kitay eto? "Tsy nahay namantatra ny fatana fandoroana an'i Huddar izy. (4)
Rehefa naheno horonan-tsarimihetsika izy dia nihira hira izay nohirainy, nihevitra izy fa misy fanahy ratsy ao amin'ny mpamoaka horonan-tsarimihetsika
Ny fiainan'i Sharada taloha Ny fitakiana Bengali sy ny fanararaotan'ny vahoaka Marathi
Sharad dia nitovy be Bengali vehivavy, mifanohitra amin'ny an'i Uttara Marathi fomba. Ankoatr'izay, tamin'ny fisavorovoroana am-pihetseham-po sy maneso, Sharada dia naneho fihetsika manavakavaka sy mitsaratsara ny vahoaka Marathi.
Sharada dia miantso ny vahoaka Marathi "dasyus", izay midika hoe "mpandroba" amin'ny Bengali (5). Nasehony ny fihetsiky Bengali iray manoloana ny vahoaka Marathi, izay noheverin'i Bengalis ho ambany. Tsy nety nianatra ny fiteny Marathi i Sharada, izay heveriny ho fiteny henjana.
Satria tsy nianatra ny fiteny Marathi izy, tsy afaka nifandray tamin'ny fianakaviana Huddar i Sharada. Nandany fotoana betsaka tamin'ny androny izy, namaky boky Bengali sy episita tamin'ny fiteny Bengali, izay tsy takatr'i Uttara.
Mampihomehy sy mahatsikaiky fa i Sharada dia mpitsara sy manavakavaka ny Marathis, izay ho foko niaviany ho tonga nofo ho Uttara. Araka ny nomarihina, ity tranga ity dia mampiseho fa tsy fahendrena ny mametraka ny maha-izy azy eo amin'ny zom-pireneny na amin'ny foko, satria afaka miova izany amin'ny androm-piainany iray hafa.
Ny fiainan'i Sharada taloha Life Bengali
Ny fanao sy ny fitondran'i Sharada dia naneho ny kolontsainy Bengali. Araka ny nomarihina, nanao sarin'ny sari-tany teo ambonin'ny lohany i Sharada, namorona sarona iray, izay fomban'ny vehivavy Bengali. Tsy nanao sariana toy izao i Uttara. Nandeha tsy nikiraro i Sharada raha nandao ny trano izy, tahaka ny nataon'ireo vehivavy Bengali tamin'ny taonjato faha 19, raha nanao kapa na kiraro i Uttara rehefa nivoaka izy. Nandao ny volony i Sharada, raha i Uttara kosa nanintona ny volony ho anaty penina. Nipetraka teo amin'ny tany i Sharada, raha nipetraka teo ambony seza i Uttara. Sharada nandrohona rano mangatsiaka, tahaka ny efa nataony tao amin'ny taonjato faha 19, fa i Uttara kosa nandro tao anaty rano mafana.
Sharada nampihatra vermillion na cinnabar amin'ny volon'ny volo, fomban'ny vehivavy vady Bengali. Rehefa nanontany ny fianakavian'ny fianakavian'i Uttara izy mba hanampy azy hampihatra ilay cinnabar, dia tezitra i Sharada raha toa ka hampihatra ny cinnabar avy eny an-tampon-dohany mankany amin'ny handrina, izay midika hoe ny kolontsaina Bengali dia mety hijaly ny vehivavy maty vady. Ny fomba mahazatra Bengali dia ny mampihatra ny cinnabar amin'ny fomba mifanohitra, avy amin'ny handrina hatreny amin'ny lohan-doha. Sharada dia nanontany ihany koa fa ny alta, loko mavokely mena, dia ampiharina amin'ny sisin'ny tongony, fomba fanao Bengali hafa.
Niarahaba ireo olon-dehibe i Sharada tamin'ny nanohina ny lohany tamin'ny tany, fomba nentim-paharazana Bengali. Na dia sosotra sy sariaka aza i Uttara, tsy tian'i Sharada ny tsy hitan'ny olon-tsy fantatra raha tsy Bengali izy ireo. Tsy navelan'i Sharada hifaneraserany ny rain'i Uttara, satria tsy nahatsiaro azy ireo izy.
Reincarnation & Fiovana amin'ny fanompoana ara-pinoana
Nivavaka i Uttara sy ny fianakaviany, ny Huddars Ganesh, ny andriamanitra Hindoa miaraka amin'ny lohan'ny elefanta. I Sharada, amin'ny lafiny iray, dia nivavaka tamin'ny andriamanitra Benga Durga, aseho amin'ny vehivavy iray manana sandry folo. Misy sary iray avy amin'i Durga eo an-kavanana.
Sharada dia nanaraka ny fomba nentim-paharazana Bengali nanamboatra sarin'i Durga teo amin'ny tany tamin'ny vovony. Amin'ny ankapobeny, Sarobidy kokoa noho i Uttara i Sharada, izay mety naneho ny fiainam-pianakavian'i Sharada, toy ny pretra tao amin'ny tempoly.
Fiovan-tarehin'i Uttara ho an'ny toetran'ny fiainana taloha Sharada
Araka ny nomarihina, i Sharada dia niseho voalohany fony izy tany amin'ny hopitaly teo ambany fiahian'ny Dr. Joshi tao 1973, fony i Xttumx taona i Uttara. Ny endrik'i Sharada dia nitohy farafaharatsiny tamin'ny Oktobra 32, vanim-potoana sivy taona.
Nijanona ela be i Sharada. Ny ankamaroan'ny fijeriny dia naharitra andro 1-3, na dia nisy aza ny fisehoan-javatra sasany naharitra herinandro na mihoatra. Ny endriny lava dia naharitra nandritra ny andro 41 sy 43. Ny habetsaky ny fisehoan-javatra dia mety miova, na dia nandritra ny fotoana maromaro aza, dia niseho indroa isam-bolana i Sharada.
Rehefa tafaverina i Uttara dia hanova ny fitafiana Bengali izay nalefan'i Sharada tamin'ireo akanjo nentin'ireo vehivavy Maratha. Sharad no niteny afa-tsy Bengali, raha tsy miteny niteny Bengaly mihitsy i Uttara.
Nolazain'i Uttara tamin'ireo naman'ny Fiangonana ny endriky ny endrik'i Sharada. Niteny i Uttara fa rehefa nihananatona i Sharada, dia nahatsapa fanaintainana sy fahalemena teo an-tampon'ny lohany izy. Afaka mahazo ny fahatsapany koa ny vitsika mikipy eny an-tampony.
Ny lelany dia hahatsapa toy ny hoe nentina tao anatiny ary nibanjina ny masony tao an-dohany. Azony ny fihetseham-po toy ny hoe mihena. Nanomboka nitomany izy ary avy eo dia ho very ny fahatsapany.
Indraindray dia hitranga mandritra ny torimaso ny fifindrana mankany Sharada. Uttara dia mety amin'ny toetrany mahazatra raha teo am-pandriana izy, ary nifoha maraina tahaka an'i Sharada.
Isaky ny miposaka i Sharada dia hangataka voninkazo izy ary indraindray izy dia handeha any amin'ny zaridaina ao Huddar mba haka voninkazo. Miaraka amin'io fihetsika io, dia hita fa nanamafy indray ny fisehoan-javatra izay nitarika fahafatesany i Sharada, talohan'ny niterahany ny cobra.
Loharam-piainan'ny Philia Reincarnation: Nitaiza an'i Sharada tamin'ny alalan'ny Cobra tao amin'ny fiainany taloha i Sharada
Misy ireo episodika izay toa an'i Sharada dia toa namindra ny soritr'aretin'ny bibilava misy poizina. Ho lasa mainty ny taingany, toy ny lelany sy ny ao am-bavany. Hamono ny masony izy ary hanondro ny tongony ary hiteny hoe: "Nisy cobra kinga nangataka ahy." (6) Araka izany dia hita fa niaina ny fahafatesany i Sharada tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo.
Fikojakojana ny fiainana an-davan'andro ao amin'ny fanahy: Sharada mieritreritra fa mbola velona izy ary mandà ny fahafantaran'i Uttara
Na dia teo aza ny famerenan'i Sharada ny tohiny tamin'ny fahafatesany, izay handehanany any amin'ny zaridaina mba haka voninkazo, dia tsy nahatsikaritra fa maty izy. Na dia nilaza aza izy fa nalain'ny kôbrà iray, nogadraina izy ary tsy nahatsiaro tena intsony, tsy nilaza mihitsy hoe maty izy.
Raha nanontaniana izy raha fanahy, hoy i Sharada namaly hoe, "Tsy fanahy aho, vehivavy aho" (7)
Indraindray rehefa niseho i Sharada dia tsy afaka niteny izy. Te hanondro ny tendany izy ary hisioka ny karamany ny ranomaso. Toa hita fa tao anatin'ireny episod dia tsy nirakitra tanteraka tanteraka tamin'ny vatan'i Uttara i Sharada, izay nahatonga azy tsy hiantsoantso. Nandritra ny dingana goavambe dia tsy afaka nikarakara ny tenany izy ary tsy maintsy nikarakara azy ny fianakaviana Huddar, na dia nanome rano azy aza. Amin'ny ankapobeny dia afaka mamahana, madio ary mitafy ny tenany i Sharada.
Amin'ny lafiny iray, i Sharada, indraindray, dia afaka nanao fihetsika hafahafa ary tao anatin'ny telo volana dia nandao ny tranon'ny Uddar irery izy. Rehefa lasa izy dia nahita Dr. Joshi, izay noheverin'i Sharada ny vadiny.
Rehefa nanontaniana ny fomba nahatongavany tao amin'ny tranon'ny Huddar izy, dia hanome fanazavana samihafa izy, toy ny hoe tsy mahafantatra azy. Raha vao nilaza izy fa nandao azy tamin'ny Huddars ny vadiny, dia nandeha tany amin'ny toerana masina teo amin'ny Reniranon'i Ganges izy.
Nanontany ny Huddars i Sharada mba hitondra azy any amin'ny vadiny ao Shivapur na any amin'ny nenitoa izay nanangana azy tamin'ny Saptagram. Raha vao nanoratra taratasy ho an'ny vadiny izy dia nilaza hoe: "Tsy tiako izany eto. Efa ela aho no teto. Rahoviana ianao no hitondra ahy any an-trano? "(8)
Sharada dia nandà tsy tapaka ny fahalalany an'i Uttara. Rehefa nanontaniana i Uttara, dia nilaza i Sharada fa tsy fantany.
Ny Toetran'ny Tenanao Tamin'ny Taona Nahasarika Ny Fahalalahana Mahaiza Momba an'i Sharada
Sharada, mifanohitra amin'i Uttara, dia naneho ny fahaiza-manaony. Indray mandeha izy dia nitantara voalohany tamin'ny mpitsidika ny tranon'ny dadan'i Huddar fa maty ny vadiny, tsy nanampy azy ny zanany lahy ary tsy maintsy nangataka fanampiana tamin'ny hafa izy. Tena marina ireo fanambarana ireo. Raha nisy mpanompovavy iray niasa ho an'ny Huddars dia nalefa ho fanomezan-drariny ny fangalarana, nilaza i Sharada fa tamin'io fotoana io dia nibanjina ny raibeny ary nitomany izy. Noporofoina ho marina izany tatỳ aoriana. Toy ny hoe i Sharada dia mbola mifandray amin'ny fanahy an'i Sharada | Uttara, izay namela azy hahita fomba fijery hafa.
Fiovan'ny toetr'andro taloha Sharada ao Uttara
Niteny i Uttara fa rehefa nivoaka avy tao amin'ny fizarana Sharada izy, dia nahatsapa fa "misy zavatra lavo ao amin'ny vatako." (9) Ny faharetan'ny Recovery dia mety maharitra hatramin'ny 15 minitra ka hatramin'ny adiny efatra. Mety ho sahirana i Uttara amin'ny fitenin'ny Marathi taorian'ny dingana lava nataon'i Sharada.
Tsy tadidin'i Uttara ny zava-nitranga nandritra ny dingana niaingany tao Sharada ary nifanohitra tamin'izany, tsy nahatsiaro ny zava-nitranga i Sharada raha i Uttara no tenany.
Ohatra, raha maty tamin'ny volana 3, 1981, renin'i Uttara, Monoram Huddar, dia tao anatin'ny fahatsiarovan-tena ara-dalàna i Uttara. Raha niseho tamin'ny Aogositra 8, 1981, Sharada, tsy fantany fa maty i Monoram. Rehefa nolazaina fa maty i Monoram, dia nanomboka nitomany i Sharada.
Noho ny endrika mampiavaka an'i Sharada, izay tsy nahalalan'i Uttara ny zava-nitranga raha nipetraka tao amin'ny vatany i Sharada, dia tsy maintsy manontany tena raha mety ho tranga iray io, raha misy fanahy manilika ny vatan'ny olona.
Ao amin'ny sehatra iray samihafa amin'ity tranonkala ity, dia averiko indray ny fifandraisako amin'i Kevin Ryerson, izay sehatra matihanina. Manasongadina karazana fanahy maro samihafa i Kevin, mamela ireo fanahy ireo hifandray amin'ny olona. Rehefa mandehandeha i Kevin, dia tsy mahatsiaro ny zavatra mitranga mandritra ny fandaharana izy. Rehefa mipoitra avy amin'ny fivoriana i Kevin, dia tsy mahatsiaro ny zava-nitranga nandritra ny fivoriana izy.
Mety hieritreritra mihitsy aza ny fahaiza-manaon'i Kevin hampiasaina ho fahaizana mamela ny fananany vatana amin'ny fomba voafetra. Kevin dia mamela fanahy iray hampiasa ny vatany mandritra ny fe-potoana, kanefa i Kevin dia mitazona ny fifehezana ary mety hivoaka avy amin'ny fanjakana mihazakazaka amin'ny sitrapo.
Araka izany dia misy ny fitoviana amin'ny fomba itondran'i Sharada amin'ny tranga mitranga mitranga Kevin Ryerson. Ny fahasamihafana dia i Kevin no mitazona ny fanaraha-maso ny traikefa momba ny fifamoivoizana ary afaka miverina amin'ny fahatsiarovan-tena ara-dalàna raha maniry izy. Mifanohitra amin'izany kosa, tsy nisy nifehy an'i Sharada i Uttara.
Ian Stevenson, MD, dia nahatsapa fa ny Sharada | Ny tranga Uttara Huddar dia mifanaraka kokoa amin'ny tranga vao teraka indray, fa tsy noho ny fananana, noho ny antony maromaro. Anisan'izany ireto:
Manambara ny nofinofiny: Rehefa bevohoka tamin'i Uttara i Manorama, dia nanana nofinofy mahavariana izy, izay nandefasan'ny cobra an-tongotra ny tongony ankavanana. Nalain'i Manorama ny bibilava ary nifoha avy eo. Toy ny hoe niaina ny endrik'i Sharada, ny fiainan'i Uttara taloha, i Manorama, tamin'ity nofy ity.
Sharada, hita fa, dia niezaka ny hifandray amin'i Manorama, renin'i Uttara, fa ho teraka i Sharada. Ny fanambarana ny nofy tahaka izao dia voamarina amin'ny tranga indray vao teraka, fa tsy amin'ny toeram-ponenana. Nisy fanambaràna nofinofy notantaraina tamin'ny tranga vao teraka indray Hanan Monsour | Suzanne Ghanem.
Ny fiainan'ny fiainan'i Uttara teo aloha Phobia of Snakes: Manana bibilava misy bibilava i Uttara, izay tena mafy tamin'ny efatra ka hatramin'ny valo taona. Ity toetrandro ity dia toa maneho ny fiainany taloha toa an'i Sharada, izay nanoritsoritra ny maha-bitan'ny mpanjaka cobra. Ny Phobias mifandraika amin'ny trauma niainana taloha dia voamarika amin'ny tranga vao teraka indray, araka ny hita ao amin'ny Rashid Khaddege | Daniel Jurdi raharaha momba ny fanambadiana.
Raha raisina ho toy ny raharaha momba ny fanambadiana indray io tranga tena mahavariana io, dia asehony ireto zavatra manaraka ireto:
Ny Xenoglossy sy ny toetran'ny olona voatahiry ao amin'ny fanahy: Afaka nifampiresaka betsaka tao Bengali i Sharada. Nanamarika ny Profesora Pal fa adiny folo no nifampiresahany tamin'i Sharada tany Bengali. Mifanohitra amin'izany kosa, i Uttara, ny toetrany ankehitriny, sy ny fianakaviany, dia tsy mahay miteny Bengali mihitsy.
Ny tarehimarika Sharada dia toa nitazona tanteraka tao anatin'ny fanahy. Tsy dia nahafantatra akory i Sharada fa maty izy. Ankoatra izany, nandà i Sharada na dia fantany aza hoe iza ny toetra ankehitriny, Uttara.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Uttara, fony mbola zaza, dia nanana tandroka feno bibilava, izay toa maneho ny fahafatesany nandritra ny fiainany taloha toa an'i Sharada, tamin'ny alalan'ny mitefoka cobra.
Fanovana ny zom-pirenena, ny firazanana ara-poko ary ny finoana ara-pinoana: Sharada, ilay toetran'ny fiainana taloha tao Bengali, dia naneho fanamavoana ny vahoaka Marathi Indiana, izay an'i Uttara sy ny fianakaviany. Nantsoin'i Sharada ho “mpandroba” aza ny Marathi. Na dia samy Hindou aza izy ireo dia nivavaka tamin'i andriamanitra Durga i Sharada, fa i Uttara sy ny fianakaviany kosa dia natokana ho an'i Ganesh.
Fanahy mandray anjara & manambara nofy amin'ny tranga Reincarnation: Rehefa bevohoka tamin'i Uttara i Manorama, dia nanonofy izy fa efa saika hogadraina amin'ny tongony lehibe izy amin'ny bibilava iray. Toy ny hoe niaina ny endrik'i Sharada, ny fiainan'i Uttara taloha, i Manorama, tamin'ity nofy ity. Toa i Sharada, avy amin'ny tontolon'ny fanahy, dia niezaka nifampiresaka tamin'i Manorama, nanambara fa ho teraka aminy izy.
1. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 74
2. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 121
3. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 121
4. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 114
5. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 115
6. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 112
7. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 113
8. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 114
9. Stevenson, Ian: Fiteny tsy fantatra, Fianarana vaovao ao Xenoglossy, University Press of Virginia, Charlottesville, p 109